Magaalaa Asallaa keessatti dargaggoonni heddu hidhaman - NuuralHudaa
Magaalaa Asallaa keessatti dargaggoonni heddu hidhaman
Pooolisiin Federaalaa fi Oromiyaa guyyaa har’aa dargaggoota magaalaa Asallaa haala nageenya magaalattii irratti mari’ataa turan reebuun kan bittinneessan tahuu odeeyfannoon ni addeessa. Guyyaa kaleessaa qophii simannaa Adda Bilisummaa Oromoo ilaalchisee, dargaggoonni magaalattii keessatti alaabaa addichaa dhaabaa fi halluu dibaa yeroo turanitti, dhalattoonni saba Amaaraa gurmaayuun dargaggoota kanneen jeequuf kan yaalan tahuun beekameera.
Kaleessaa waaree booda dhalattoonni saba Amaaraa magaalattii keessa jiraatan Alaabaa addichaa dargaggoonni dhaaban buqqisanii cicciruun kan Minilik dhaabuu isaanii hordofuun, walitti bu’iinsi ka’e jechuun namni dubbisne nuuf hime. Akka namni kun jedhetti:
“Walitti bu’iinsa uumame kanaan guyyaa kaleessaa yoo diqqaate namni 50 ol miidhamee hospitaala magaalaa Asallaatti yalaama jira. Guyyaa har’aa immoo dargaggoonni walitti qabamnee dhimma nagayaa irratti osoo marii irra jirru, poolisoonni reebicha nurratti raawwatan” jechuun nuuf hime.
Reebicha Poolisoonni har’a raawwatan kanaanis dargaggoonni heddu kan miidhaman tahuu namni dubbisne kun nuuf hime.